ओलीकै पालामा ढुक्कसँग बिदा बस्न मिल्ने ! | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
माघ ५, २०७५ शनिबार ८:२८:४ | मिलन तिमिल्सिना
केही केही सार्वजनिक बिदा ससुराली र माइती मावल जान तथा तास खेलेर बस्नकै लागि हो । बिदा दिनेदेखि बिदा मनाउनेसम्म सबैले देखेजानेको र भोगेको सत्य यही हो । पत्यार लाग्दैन भने पोहोरसम्म हुने केही सार्वजनिक बिदाको बेलिविस्तार लगाऔं ।
सबैभन्दा पहिले प्रजातन्त्र दिवसको कुरा गरौं । प्रजातन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अरु केही मान्छे टुँडिखेल जान्थे । सेना र प्रहरीले कवाज देखाउँथे । प्रधानमन्त्रीले परेवा उडाउँथे, भाषण गर्थे । केही विभाग र स्थानीय तहका कर्मचारीले झाँकी पनि देखाउँथे ।
ल्होसारमा निश्चित समुदाय मात्र नाचगानमा रमाउँछन्, ल्होसार नमनाउने कर्मचारीले म्यारिज नखेलेर के गर्ने ? कृष्णाष्टमी र रामनवमीमा उनै भगवानलाई मात्र भ्याईनभ्याई हुने हो, अरुलाई त फुर्सदै फुर्सद । जनै पूर्णिमामा पनि बिहान एकछिन डोरो र जनै लगाएपछि अरु काम हुँदैन । कार्यालय बिदा हुँदा तासै खेलेर समय बिताउने हो ।
तीजको बेला महिला कर्मचारीलाई दरखाने दिन दिउँसैदेखि बिदा मिल्थ्यो । आज माइत जानुछ, अलि छिटो जान्छु है भनेपछि हाकिमले नाईं भन्दैनथिए । हाकिमलाई पनि दरखाने दिन चाँडै घर पुग्नुपर्थ्याे ।
हाकिमलाई नै चाँडै जान परेपछि अरु कर्मचारी मात्र किन ढिलोसम्म बसिरहने ? त्यही दिन बेलुका माइत पुगिन्थ्यो । महिना दिनदेखि नै दर खाने गरे पनि तीजको अघिल्लो दिनको दरको छुट्टै मज्जा । दर खाँदाखाँदै आधारात हुन्थ्यो । भोलिपल्ट तीजको दिन घाँटी बस्नेगरी गीत गाउँदा, कम्मर मर्काएर नाच्दा र ताली पड्काउँदा जीउ गलेर हैरान ।
अफिस खुल्ने दिन भए पनि धेरैले त बिरामी भएँ भनेर टार्थे । भोलिपल्ट ऋषिपञ्चमीमा बिदा हुने भएपछि बीचको एकदिन किन अफिस जाने ? नगए पनि सुख पाइन्थ्यो । तर ओली सरकारले यसवर्ष ऋषिपञ्चमीको बिदा दिएन ।
ऋषिपञ्चमीमा बिदा नपाइने भएपछि माइत जाने बाटो बन्द भयो । अफिसमा पूरा समय काम गर्ने हो भने दरखाने दिन टाढाको माइत पुग्न भ्याईंदैन । भ्याईहाले पनि तीजको दिनमै माइतबाट फर्किनुपर्छ, भोलिपल्ट अफिस भ्याउनलाई । दरखाने दिन पनि पुरै काम गर्नुपर्ने, तीजको भोलिपल्ट पनि बेलैमा अफिस पुग्नुपर्ने भएपछि तीजमा कसरी माइत जाने ?
पुरुष कर्मचारीको समस्या पनि यही हो । पहिले पहिले त महिला कर्मचारीलाई बिदा हुन्छ के काम गर्ने भनेर छलछाम गर्न पाइन्थ्यो । दरखाने दिनदेखि तीन दिनसम्म काम नगरे पनि हुन्थ्यो । तर ऋषिपञ्चमीमा समेत महिला अफिस आउने भएपछि खुरुखुरु काम गर्नुपर्यो, छलछाम गर्न पाइएन ।
तीजको कुरा छोडौं, सबैभन्दा ठूलो आपत त दशैंमा भयो । पोहोर परारसम्म टीकाको दिन घरमा अक्षता र जमरा लगाएर हिँडेपछि द्वादशी र पूर्णिमासम्म सबै आफन्तको घरमा टीका र आशीर्वाद थापेर भ्याइन्थ्यो । आफ्नो मावल, बाको मावल, आमाको मावल, माइत, ससुराली, ससुरालीका खलक सबैतिर चाहार्न भ्याउँदा खल्तीमा अटाईनअटाई दक्षिणा हुन्थ्यो ।
एकातिर दक्षिणा, अर्कोतिर भेटघाट र रमाइलो । पूर्णिमासम्म ढुक्कले दशैं मनाएपछि बल्ल अफिस जाने दिन आउँथ्यो । पूर्णिमाको भोलिपल्ट अफिस खुले पनि काम लयमा आउन दुईचार दिन लाग्थ्यो । दुईचार दिन काम भएपछि फेरि तिहारको बिदा आउँथ्यो । घटस्थापनादेखि छठसम्म छलछाम गरेरै दिन जान्थ्यो ।
वर्षौंदेखि यसैगरी छलछाम र रमाइलो गरी बित्दै आएको यी बिदा यसपटक कटौती भयो । सबैभन्दा दुःखको कुरा त सरकारले माइत, मावली र ससुराली जाने बाटो नै बन्द गरिदियो ।
तर ओली सरकारले गर्नु गर्‍याे । दशैंमा फूलपातीदेखि एकादशीसम्म ५ दिन मात्रै बिदा भयो । फूलपातीको दिन बल्ल घर पुगियो । टीकाको दिन घरमा अक्षता र जमरा लगाएपछि न मावल जान भ्याइयो, न ससुराली पुग्न । द्वादशीको दिन अफिस पुग्न टीकाको भोलिपल्टै घरबाट हिँड्नुपर्यो ।
पहिले पूर्णिमासम्मै हुने दशैं अब एकादशीदेखि नै सकियो । न तीज रमझम भयो, न दशैं । न घुमघाम र रमाइलो, न जुवातास र कौडा । ओली सरकारले गर्नु गर्योे । न घ्वाँ घ्वाँ रुन सकियो, न पेट मिचिमिची हाँस्न ।
हप्तामा दुई, चार दिनसम्म रमाइलो गरेर बिदा बस्ने बानी भएकालाई यसवर्ष निकै उकुसमुकुस भयो । केही स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत दिन खोजे पनि सबैले बिदाको सुविधा पाएनन् ।
बिदाभन्दा धेरै काम गर्न परेपछि कर्मचारीको सिर्जनशील क्षमता कमजोर भयो । धेरै काम भएर छिटै समृद्धि हासिल हुने हो कि भन्ने डर बढ्न थाल्यो । चुनाव भएको वर्ष दिनमै सबैथोक काम गरेर सक्ने हो भने बाँकी चार वर्ष के गरेर बस्ने ? डर सरकारलाई पनि भयो ।
त्यसैले बिदा कम र काम धेरै गरेर छिट्टै समृद्धि हासिल गर्न खोजेको सरकार हच्किएको छ । समृद्धि ल्याउनुभन्दा पहिले काम गर्ने कर्मचारी र भोट दिने नागरिकको चित्त बुझाउनुपर्छ । जति धेरै विदा र अरु यस्तै सुविधा दिन सक्यो, त्यति नै कर्मचारी र नागरिकको चित्त बुझ्छ । यति कुरा थाहा पाउन वर्ष दिन लगाएको ओली सरकारले अब अर्को वर्षदेखि पुराना विदा थमौती गर्दैछ ।
अनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कुनै जनप्रतिनिधि जेलबाट छुट्टा या कसैको छोराछोरीको बिहे ब्रतबन्ध हुँदा पाइने बिदा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । पहिलेभन्दा पनि धेरै बिदा हुने हुने भएपछि ओली सरकारको जयजयकार गरौं ।